यी हुन् भारतमा तहल्का मच्चाउन सफल तीन नेपाली कलाकार ! जसले भारतीयको पनि जिते मन ! – Khabar Silo
कलाकारहरु भनेका देशका गहना हुन्। जसरी गहनाले एउटी नारीको सुन्दरता झल्काइदिन्छ,त्यसरी नै यउटा कलाकारको मध्यमबाट देशकै सोभा पनि बढिरहेको हुन्छ।
सबैमाझमा परिचित र चर्चाको शिखरमा पुग्न सबैलाई मन लाग्छ। यसमा सेलिव्रेटीहरु त अझै अग्रणी स्थानमा पर्छन्। देशमा नाम र ख्याती कमाइसके पछी अझ आफ्नो नाम अन्तराष्ट्रिय स्तरमै रोशन गर्ने अभिलाषा पलाउँछ । यस दौडानमा केहि सफल पनि भएका छन् भने केहि असफल।
भारतीय रंगक्षेत्र विश्वकै एक उत्कृष्ट स्थान हो जहाँ नाम दाम र इनाम सबै एकै ठाउंबाट पाउन सकिन्छ। उत्कृष्ठ प्रतिस्पर्धा,आधुनिक प्रविधि, शिक्षित कलाकार तथा विश्व बजारमा राम्रै स्थान ओगट्न सफल भएकै कारणले पनि बलिउड क्षेत्र सबैको सपनाको एक हिस्सा बन्नु गरेको छ।आज हामी नेपाल तथा भारतीय रंग क्षेत्रमा पनि चर्चा परिचर्चा कमाउन सफल हुने केहि व्यक्तिहरुको बारेमा चर्चा गर्दैछौं।
१ -उदित नारायण झा
उदित नारायण झा नेपाली तथा भारतीय चलचित्रको प्ले व्याक गायनमा निकै रुचाईएका व्यक्ति हुन्। उनको जन्म सप्तरी जिल्लामा डिसेम्बर १ मा भएको हो। उनले आफ्नो अध्ययन जागेश्वर हाई स्कुल,कुन्मौली ,सुपौल र विहारबाट गरेका हुन्। साथै उनले आफ्नो प्लस टु काठमाडौँको रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट गरेका हुन्। उनको बुबाको नाम हरिकृष्ण झा हो जो खेत जोत्ने कम गर्थे भने आमाको नाम भुवनेश्वरी देवी हो,जो समाज सेवा थिइन् ।
उनले पहिलो पटक रेडियो नेपालको लागी मैथिली लोक गित गएका थिए। सुरुवाती दिनहरुमा उनले मैथिली र नेपाली गीतहरुमा आवाज दिएका थिए। आठ वर्षसम्म नेपाली आधुनिक तथा चलचित्रको गायनमा आफ्नो सुमधुर आवाज छर्दै गर्दा उनलाई भारतीय राजदुतावासबाट शास्त्रीय संगीत अध्ययनको लागि भारतीय विध्या भवनबाट छात्रवृत्ति मिल्यो र उनी भारत पलायन भए।
केहि समयको सांगीतिक अध्ययन पछी पुनः भारतीय संगीतमा आफ्नो भविष्य खोज्न थाले। यसै क्रममा उनको भेट निर्देशक राजेश रोशंसंगा भयो र उनले चलचित्र युनिस बिजमा गायनको मौका दिए। त्यसपछि उदितले अन्य चलचित्रमा पनि गाउने मौका पाए। ‘बाधे दिल वाले’ बोलको गीत १९८३ मा अग्रज तथा चर्चित गायिका लता मंगेस्करसंग गाएका थिए ।
त्यस पछी उनले बलिउड गायनमा पनि पछाडी फर्किएर हेर्नु परेन । एक एक गर्दै अफर हरु आउन थाले र त्यतै स्थापित हुन भए। यसै क्रममा उनले थुप्रै रियालिटी सो र स्टेजमा पनि आफ्नो कलाकारिता प्रस्तुत गर्ने मौका पाए। उनले इन्डियन चर्चित रियालिटी सो ‘इन्डियन आइडल;मा निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पनि पाए। संगीत क्षेत्रबाट हासिल गरेको सफलता संगै उनले दिपा नारायण झासंग विवाह गरे। स्मरण रहोस दिपा पनि एक कुशल गायिका हुन्। उनीहरुको एक मात्र सन्तान अदित्य नारायण झा पनि गायन तथा रियालिटी सोमा होस्ट गर्दै आईरहेका छन्। त्यसैले यो परिवारलाइ एउटा सफल सांगीतिक परिवार भन्दा फरक नपर्ला।
२ -मनिषा कोइराला
मनिषा कोइराला एक सुन्दर,प्रतिभावान तथा सफल नेपाली चेली हुन्। उनको जन्म सन् १९७० को अगस्ट१६ मा काठमाडौँमा भएको हो। उनका बुबाको नाम प्रकाश कोइराला हो, जो एक राजनीतिज्ञ हुन् र स्वास्थ्य मन्त्रि पनि हुन् । आमा सुष्मा कोइराला एक गृहिणी हुन्। उच्च राजनीतिक खानदानमा हुर्किएकी कोइरालाको बाल्यकाल इन्डियाको दिल्लीमा बित्यो।
दिल्लीमा बस्दै गर्दा केहि गीतहरुमा मोड्लिंग गरेकी उनलाई पछी यहि अभिनय क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोज्ने रहर जाग्यो र २००४ सालमा आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने अठोटका साथ मुम्बई गइन्। साथै उनले न्युयोर्कबाट चलचित्र निर्माण अर्थात फिल्म मेकिंगमा डिप्लोमा पनि गरेकी छिन। मनिषको पहिलो नेपाली चलचित्र ‘फेरी भेटौला’ हो जुन १९८९ मा प्रदर्शनमा आएको थियो। त्यस्तै उनको पहिलो हिन्दि चलचित्र १९९१ मा प्रदर्शनमा आएको ‘सौधगर’ हो ।
१९९२-१९९४ सम्ममा उनि इन्डियन चलचित्र वृत्तमा निकै छाइसकेकी थिइन्। बलिउडमा उनको कडा परिश्रमको चारैतीर प्रशंसा हुन थाल्यो। यसै बीच मा उनले हिन्दि तथा तमिल थुप्रै चलचित्रहरुमा आफ्नो अभिनय कला प्रस्तुत गरिन। आफ्नो अभिनय यात्राकै क्रममा फिल्म फेयर अवार्ड ,बेस्ट तामिल अवार्ड ,क्रिटिक अवार्ड आदिले पनि सम्मानित भईन।
आफ्नो चलचित्र निर्माण सम्बन्धि अध्ययन सकेपछी ‘पैसा वसूल’ भन्ने चलचित्र २००४ मा सुस्मिता सेनको साथमा निर्माण गरिन्। यसरी हिन्दि तथा विभिन्न चलचित्रमा अभिनय गरेर सफलता कमाउने नेपाली नारी चेली मनिषा एक उदाहरणीय व्यक्तित्व हुन्। २०१२ मा नेपालका एक विजनेस म्यानसंग विवाह गरेकी उनको वैवाहिक जीवन भने सफल हुन सकेन। क्यान्सर पिडित मनिष कोइराला अप्रेसन पछी अहिले स्वस्थ छिन्। उनका केहि नजिकका सहपाठीका अनुसार उनि पनि छिट्टै नेपाली राजनीतिमा संलग्न हुने संकेत बताउँछन्।
पछिल्लो समयमा उनले ‘हिल्ड’ नामको पुस्तक बजारमा ल्याएसँगै उनको चर्चा अझै चुलिएको छ। उक्त कितावमा उनको क्यान्सर यात्राको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। ‘हिल्ड’ अहिले सम्म कै सर्वाधिक विक्री भएको पुस्तक मध्ये एक रहेको छ। यसरी एक पछी अर्को रेकर्ड राख्न सफल मनिष कोइराला एक सफल तथा उत्कृष्ट तथा प्रतिभावान नारी हुन्।
३ – सुजन मार्फा
इन्डियन रियालिटि सो डान्स प्लसको फस्ट रनरअप सुजन मार्फाको जन्म सन् १९९८ मा काठमाडौँको जोरपाटीमा भएको हो। ६ वर्षको उमेरबाट नै नृत्य गर्न थालेका सुजन निकै मिहनती र प्रतिभाशाली छन् । उनका दुई जना दाइहरु पनि नृत्यमै सकृय छन्।
सामान्य परिवारका सुजनले प्लस टु सम्मको अध्ययन सकी सकेका छन्। उनले काठमाडौँको अरुणिमा हाइयर सेकेन्डरी स्कुलमा अध्ययन गरेका हुन्। यस अघि डिआईडी सिजन ६ मा पनि आफ्नो दमदार प्रस्तुती देखाई सुजनले नेपाल मात्र नभई भारतमा पनि सबैको मन जित्न सफल भैसकेका थिए।
हाल उनको काठमाडौँमा ‘एलिड प्रोफेसनल डान्स इन्सिटट्युट २० क्रु’ मार्फत डान्सको प्रशिक्षण केन्द्र संचालित छ। खुसिको कुरा त यो पनि छ कि उनलाई भर्खरै विश्वमै आफ्नो कला देखाउने मौकाको लागि ‘अमेरिकाज गट ट्यालेन्ट’ बाट प्रस्तुतिको लागि अफर आएको छ। उनका अनुसार अव छिट्टै उनि अमेरिकाज गट ट्यालेन्टको लागि अमेरिका उड्ने छन्।